Shiinaha OEM 3D Indhashareerka Mink Lashes Handmade Makeup Full Strip Lashes Warshadaha iyo soosaarayaasha | Weiti
OEM 3D indhashareerka Mink Lashes Handmade Makeup Full Strip Lashes
1, DOLORES karbaash dabiici ah
2, 14mm 100% timo mink dhab ah
3, sanduuqa baakadaha karbaashka karbaashka summada gaarka ah
4, Alaab diyaarsan oo weyn oo markab ku habboon
1, Kutlada Isgoyska Dabiiciga ah & Lakabyo Badan:Mid kasta oo ka mid ah indhashareerka mink-ga waa mid gacanta lagu sameeyay. Waxay leedahay saamayn lakab oo kaamil ah, soo jiidasho leh, oo dhalaalaya. Waxaa lagu hagaajin karaa cidhifyada, samee qurxiyo qurux badan. Ku habboon xirashada maalinlaha ah, sawir qaadista xafladda.
2, Mink Fur oo aan naxariis lahayn:Indhahayagu waa mid aan naxariis lahayn, kaas oo ka samaysan dhogor mink oo Siberian ah, oo ka soo jeeda dabada dhoobada macdanta ah ee tinta dabiiciga ah ee dhaca. Kadibna la fayodheeyo oo la midabeeyo ka hor intaan la baakadeyn. Dhanka kale, karbaashyada mink -ka ayaa laga dareemayaa inay ka raaxo badan yihiin karbaashyada isku -darka ah. Dabeecadda dabiiciga ah, qaloocan, hypoallergenic, sida karbaashyada dabiiciga ah ee aadanaha, oo aan ka xanaajin indhahaaga.
3, Gacanta Lagu Sameeyay Band Suufka Jilicsan:Laynka dhuuban ee madow wuxuu indhahaaga ka dhigayaa mid u eg saamayn indho -indheyn, aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Waxaa dib loo isticmaali karaa in ka badan 20-25 jeer daryeel habboon. Ma sahlana inaad ku kala baxdo xariijinta karbaashka waarta.
4, Miisaanka Fudud- Dareen La'aanLammaane kasta oo ka mid ah miisaanka indhashareerka mink waa 0.5 garaam oo keliya. Culeysyo fudud "0", ma laha dareen culus. Markaa xitaa ma dareemi kartid miisaankiisa, markaad xirato. Isla mar ahaantaana, waa ammaan iyo saaxiibtinimo indhaha xasaasiga ah ama kuwa gashan muraayadaha indhaha.
Hore: Iibinta Kulul ee 3D Minka Indhaha ah Jumlad 100% Jeexitaan dhab ah oo Siberian ah
Xiga: Indhashareerka Warshadaha Jumlada Warshadaha Jilibka 3D Karbaash leh sanduuq indhashareer sumad gaar ah leh
3D Dabiici ah 100% Mink Eyelas
Beenta Mink Beerka
Karbaashyada Strip Full
Indhashareerka Jumlada Warshadda Jumlada Iibiyaha 3D Karbaasha wi ...
Bulk Eye Lashes Biyo aan la isticmaali karin 3d Classic ...
Calaamadda Gaarka ah ee Jumlada 100% Gacan -ku -samayska F ...
Wareysiga Jilibka 3D Strip Mink Eye Manufact Manufact ...
Jumlado fudud si aad u dalbato Strip buuxa 3d 5d 100% Mink L ...
jeedal mink, Kordhinta Indhaha, indho -dejiye, Jeexa indhaha, dibinta, Iibiyeyaasha Indhaha,